Qaadacaadda Faransiiska: Dalka afaraad ee ugu Muslimiinta badan dunida oo dibadbax wayn uu ka dhacay | Caroog News
Qaadacaadda Faransiiska: Dalka afaraad ee ugu Muslimiinta badan dunida oo dibadbax wayn uu ka dhacay
Qoraalka sawirka,Waxay gubeen sawirada madaxweyne Emmanuel Macron, oo difaacay kartoonadii Nabi Muxamed NNKH
Tobanaan kun oo dad ah ayaa socod ku maray caasimada Bangladesh ee Dhaka, iyagoo dalbanaya in la qaadaco badeecadaha Faransiiska xilli khilaaf ka taagan yahay mowqifka adag ee Faransiiska ka taagan yahay Islaamka xagjirka ah.
Waxay gubeen sawirada madaxweyne Emmanuel Macron, oo difaacay kartoonadii Nabi Muxamed NNKH.
Booliska ayaa dibadbaxayaasha ka horjoogsaday inay gaaraan safaaradda Faransiiska.
Isniintii, Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu sidoo kale ku baaqay in la qaadaco alaabada Faransiiska.
Laakiin dowladaha Yurub oo dhan waxay u soo baxeen taageerida Mr Macron waxayna cambaareeyeen hadalada Mr Erdogan ee ku saabsan hogaamiyaha Faransiiska.
Maxaa ka dhacay magaalada Dhaka?
Booliisku waxay ku qiyaaseen in ilaa 40,000 oo qof ay ka qeybgaleen socodkan, oo ay soo qabanqaabiyeen xisbiga Islami Andolan ee Bangladesh, oo ka mid ah xisbiyada Islaamiga ah ee ugu waaweyn Bangladesh.
Dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqayay “Qaadac alaabooyinka Faransiiska” waxayna ku baaqayeen in madaxweyne Macron la ciqaabo.
“Macron waa mid kamid ah hogaamiyaasha kooban ee caabuda Shaydaanka,” hogaamiyaha sare ee Islami Andolan Ataur Rahman ayaa u sheegay dibad baxayaasha.
Qoraalka sawirka,“Macron waa mid kamid ah hogaamiyaasha kooban ee caabuda Shaydaanka,” hogaamiyaha sare ee Islami Andolan Ataur Rahman ayaa u sheegay dibad baxayaasha
Wuxuu ku booriyay dowladda Bangaladhesh inay dalkeeda ka saarto safiirka Faransiiska.
“Faransiisku waa cadowga Muslimiinta, kuwa iyaga matalaana sidoo kale waa cadawgeenna,” ayuu yidhi Nesar Uddin oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha xisbiga.
Booliska ayaa adeegsaday silig adag si ay u xiraan waddo qiyaastii seddex mayl (5km) u jirta safaaradda Faransiiska, iyaga oo ka fogeeyay socodka.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Faransiiska ayaa soo saartay digniin ku socota muwaadiniinteeda ku sugan Indonesia, Bangladesh, Iraq iyo Mauritania – oo ah waddamada mudaharaadyada ay ka dhaceen – waxayna kula talisay inay taxaddar muujiyaan.
Maxay arrintani salka ku haysaa?
Qoraalka Muuqaalka,Rallies in Paris, Toulouse, Lyon and other French cities in support of Samuel Paty
Falcelinada kale ee hadalka Macron
Sacuudi Carabiya ayaa soo saartay bayaan rasmi ah oo ay ku cambaareyneyso kartoonadii nebi Muxamed NNKH, laakiin ma aysan xusin Faransiiska magacooda.
Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibedda ayaa lagu sheegay in waddanku “uu ka soo horjeedo isku day kasta oo lagu doonayo in la isla xiriiriyo Islaamka iyo argagixisada” iyada oo intaas ku dartay in sidoo kale “ay cambaareyneyso dhammaan falalka argagixisanimo, iyada oo aan loo eegin dambiilaha”.
Hogaamiyaha Chechnya Ramzan Kadyrov ayaa ku eedeeyay Mr Macron inuu kicinayo muslimiinta, asaga oo sheegay in madaxweynaha faransiiska asaga laftiisu uu umuuqdo argagixiso